Dalalka Islaamka ee aan maanta laga ciideynin munaasabadda Ciidul Adxaa (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa maanta guud ahaan Soomaaliya iyo dunida Islaamka looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidul Adxaa oo ah mid ka mida labad ciidood ee ugu waaweyn Muslimiinta.
Boqortooyada Sacuudiga oo saldhig u ah Diinta ayna ku yaallaan Xaramka barakeysan ee Kacbada iyo Masjidka Rasuulka NNKH ayaa lagu raacaa ciidaha Islaamka, siiba Ciidul Adxaa oo ku xiran Xajka sanadkiiba loo tago Xaramka, laakiin waxaa jira dalal ka mida kuwa islaamka oo aan raacsaneyn si gaar ahna ciidahadooda ula goobi noqda.
Dalalka Islaamka ee aan maanta ciideynin, waxay kala yihiin:
Dalalkan ayaa intooda badan shaaciyey bilowgii Bisga Dulxaj inay waayeen dhalashada bisha Axaddii, waxayna bisha u bilaabatay maalintii Isniinta, iyadoo Berri oo ay bisha July tahay 21 ay u bilaaban doonto Ciidul Adxaa.
Previous articleAmiirka Alshabaab Digniin Culus & hanjabaad kasoo saaray Doorashada Soomaaliya (Farriin culus)
Next articleDuqeyn lagu qaaday Ciidamadii Alshabaab ee isku urursaday duleedka Bacaadweyn iyo Tirada lagu dilay…